Home / रोचक / कपडा किन्नुभन्दा पहिले के कुरामा ध्यान दिने ?
कपडा किन्नुभन्दा पहिले के कुरामा ध्यान दिने ? 0
० काम गर्नका लागि निश्चित कपडा पहिरिँदा तपाईंलाई उत्प्रेरणा मिल्छ । यदि तपाईं फिटनेस सेन्टर वा एक्सरसाइजका लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने वर्कआउटमा लगाउने कपडाभन्दा फरक ड्रेसअप गर्नुस् । र, नियमित त्यही कपडाको प्रयोग गर्नुस् । प्रायः फिटनेसका लागि हल्का र स्पोर्टी खालका कपडा पहिरिनु राम्रो हुन्छ ।
० एक अध्ययनले देखाएको छ कि जुन मानिस रातो कपडामा हुन्छ उसले बढी तौल उठाउन सक्छ । यस्तो अध्ययन २००४ को ओलम्पिकमा भएको थियो । त्यतिवेला जजसले रातो कपडा पहिरिएका थिए उनीहरूले नै बढी इभेन्ट जितेका थिए ।
० जर्नल अफ फेसन मार्केटिङ एन्ड मेनेजमेन्टमा छापिएको एक अध्ययनले भनेको छ कि मानिसले कपडाका माध्यमबाट मूल्यांकन गर्न सुरु गर्छ । त्यसैले तपाईंको फस्र्ट इम्प्रेसन कस्तो हुन्छ भन्नेमा तपाईंले पहिरिएको कपडा पनि जिम्मेवार बन्छ । फर्स्ट इम्प्रेसन गज्जब दिन चाहनुहुन्छ भने ड्रेसअपमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुस्, जति अरू सम्बन्धित विषयमा दिनुहुन्छ ।
० ड्रेसअपमा फर्मल बिजनेस सुटको पनि महत्वपूर्ण भूमिका भएको अध्ययनले देखाएको छ । यस्तो ड्रेसअपले तपाईंको आत्मविश्वास बढाउँछ । बिजनेस सुट पहिरिँदा आफूलाई बलियो महसुस गर्नुहुन्छ र निकै छिटो निर्णय लिनुका साथै क्रिएटिभ पनि बन्न सक्नुहुन्छ ।